XOG:- Xukuumadda oo qaab cusub u suggi doonta amniga magaalada Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xukuumadda oo qaab cusub u suggi doonta amniga magaalada Muqdisho
Xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lasoo bixi doonta qorshe cusub oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada Muqdisho, kadib markii ay soo bateen falalka amni darro.
Golaha wasiirada oo maanta yeelanaya kulan looga hadlayo amniga iyo abaarta dalka ayaa waxaa kulankaasi xiggi doonna kulan kale oo gaar ah.
Ra’iisul waaare Xasan Cali Kheyre, wasiirada amniga, gudaha, saraakiisha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda qaranka ayaa yeelan doonna shir albaabada u xiran, kaasi oo looga hadli doonno hannaan cusub oo loo xaqiijiyo ammaanka magaalada Muqdisho.
Shirkaan ayaa noqonaya mid saacado qaata, waxaana lasoo saari doonnaa qaab ka duwan sida hadda amniga loo sugo.
Ciidamo dheeraad ah ayaa lagu soo daadin doonnaa guud ahaan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo wax ka bedali doonna amniga magaalada.
Saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyadda ee Villa Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in markaan xoogga la saari doon amniga guud ee magaaalada Muqdisho.
Shirkaan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay dilalka qorsheysan ay si xowli ah ugu soo bateen magaalada Muqdisho, iyadoona dhowr jeer hore ay magaalada uga dhaceen falal lidi ku ah ammaanka magaalada.